UHariel, ingelosi egciniweyo efuzisela ukucoceka kunye nenkululeko - Ukuvumisa Ngeenkwenkwezi
UHariel, ingelosi egciniweyo efuzisela ukucoceka kunye nenkululeko
Ukuba wazalwa phakathi komhla woku-1 nowesi-5 kuJuni, ingelosi yakho ekugcinayo nguHariel. Ufuzisela ukucaca kunye nobunyulu. Funda ngakumbi ngeempawu zakhe.
Ukuba wazalwa phakathi kukaJuni 1 ukuya ku-5, ingelosi yakho ekugcinayo nguHariel, gama elo elithetha 'uMsindisi kaThixo'. Le yingelosi yabadali, yabo bathanda ukufunda nokwakha izinto. Ukwajolise ekuphuculeni imeko yokomoya kunye nokholo lwabo bazelwe phantsi kwakhe. Ewe, abemi baseHariel banobuhlobo kakhulu, bayathanda ukufikelela ebantwini kunye nokwenza ukuhlangana okucebisayo. Ngokholo kunye nenkolelo abazama ukuyiphuhlisa, baxhomekeke kuyo ukuba ibancede babeke ubomi obunyulu nokuziphatha yonke imihla. Funda ngakumbi ngengelosi yakho kunye nento ekufuneka uyenzile ukunxibelelana nayo.
UHariel, ingelosi egcinayo yaseGemini (ukusuka nge-1 ukuya kwi-5 kaJuni)
Unxibelelana njani naye?
UHariel yingelosi yenkululeko kunye nenkuthazo . Kungenxa yoko le nto eyingelosi yabadali, abafundi kunye nabo bathanda ukufunda. Ukwayingelosi egcinayo yokholo; uyakuvumela ukuba wandise ubumoya bakho kwaye uhlambulule isimilo sakho. Fumanisa ngakumbi ngaye kwaye ufunde indlela yokunxibelelana nengelosi yakho.
Iimpawu uHariel asikelela abantu baseGemini abazalwe phakathi kukaJuni 1 - 5 no:
Ukubona amanani kathathu
Ingelosi engumgcini uHariel yingelosi eyindoda efuzisela ukucoca kwaye Ukucaca . Abantu abazalelwe phantsi kwempembelelo yakhe baya kuba kufutshane noluntu kunye nabanye abantu. Kubo, zonke iintlobo zokholo zibalulekile. Kungenxa yoko le nto abalandeli bakhe behlala bephila ubomi obusulungekileyo nobunyulu, ngaphandle kwesiyobisi.
Uthando, uPhuhliso, iMishini yoBomi, uMsebenzi
Iikherubhi, abagcini bokukhanya kunye neenkwenkwezi
I-Chochmah ethetha ubulumko, kunye ne-Hod oko kuthetha uzuko
IAventurine, iHematite, iLapis Lazuli, iAmethiste, iMalachite, iPyrite
Uranus kunye neMercury
Kutheni ubiza uHariel?
Ukubiza uHariel kuyakuvumela ukuba lungelelanisa iingcinga zakho kunye neminqweno yakho kwaye iyanceda ukuba likhoboka. Kwigama lomntu nelobungcali, uyakukhuthaza ukuba usebenze ngokukuko kwaye ube nemveliso. Unokufumana uthando lokucinga, isayensi kunye nokubhala ngokunxibelelana nale ngelosi ilondolozayo. Uyakuvumela ukuba ube nobuhlobo kwaye yokuziphatha kakhulu .
Ingelosi engumgcini uHariel ubonelela:
Isivumelwano phakathi kwamalungu osapho
Ukukwazi ukuzikhulula kwimikhwa emibi
Uncedo kwizifundo zeelwimi kunye nezomthetho
Ukukwazi ukusuka ekubeni ungasebenzi uze usebenze
Unganxibelelana njani kwaye nini
Iintsuku zikaHariel kunye neeyure zokuphinda asebenze kuzo ngama-23 kaJanuwari, nge-4 ku-Epreli, nge-18 kaJuni, nge-1 Septemba nange-12 kaNovemba phakathi ko-04: 40 no-05: 00.
Ukunxibelelana nengelosi yakho ekugcinayo, yitsho lo mthandazo ngesiqhumiso seMastic:
Angel Hariel, ndivumele ukuba nditshintshe imikhwa emibi ephazamisa ubomi bam,
Ucoce umphefumlo wam nesazela sam,
indlela yobomi 3 kunye 6 ukungqinelana
Coca umzimba wam wenzakele,
Yomeleza ukholo lwam, ndenze ukuba ndiyile ngakumbi, ndisebenze ngakumbi.
U-Omael, ingelosi egciniweyo eqinisekisa umonde kunye nokuchuma
imihla yeempawu zokuvumisa ngeenkwenkwezi
inkwenkwe okanye intombazana isi-chinander calander
ukuhambelana kothando kunye ne-taurus
Ngaba ilibra kunye ne-aquarius ziyahambelana
lithetha ntoni uphawu lwam lwe-zodiac